Maxkamadda Sare ee Mareykanka oo soo saartay go’aan ka dhan ah Soomaalida | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Maxkamadda Sare ee Mareykanka oo soo saartay go’aan ka dhan ah Soomaalida
Maxkamadda Sare ee Mareykanka oo soo saartay go’aan ka dhan ah Soomaalida
Maxkamada ugu sarreeysa dalka Maraykanka ayaa soo saartay go’aan ay dad baddan oo soo galooti ku ah dalkaasi Mareykanka ay ka sugayeen Madaxda dalkaas.
Maxkamada ayaa go’aan ka soo saartay in sharciga degenaanshaha ee loo yaqaano Kaarka Cagaaran (Green Card) aan loo ogolaanin qofkii haysta waxa loo yaqaano Sharciga ku meel gaarka ah Temporary Protected Status (TPS), haddii uu qofku si sharci daro ah dalka ku soo galay markii uu is dhiibayey ama uu codsiga degenaansha dalka codsanayey.
Go’aanka ka soo baxay Maxkamada dalka Mareyka ugu sarreeysa ayaa dhabar jab ku ah dad badan oo Soomaaliyeed iyo qoomiyadaha kaleba ee soo galootiga ku ah dalkaas, kuwaas oo muddo sugayay sharci rasmi ah.
Qareenadda iyo sharci yaqaanadda ayaa ku dhiirigelinaya qof kasta oo ay arrintani saameeyn ku leedahay in ay la xiriiraan qofka u qareen ah si ay uga helaan wixii faah faahin ah ee la xiriira g’aanka Maxkamada.
Dalka Mareykanka ayaa waxaa ku nool Soomaali aad u farabadan, kuwaas oo qaarkood heysta sharci rasmi ah halka qaar ay si sharci darro ah ku joogaan, iyada oo Go’aanka kasoo baxay Maxkamadda uu saameyn doono.
Previous articleShir lagu heshiisiinayo maleeshiyaad dagaalamay oo Maanta furmay.
Next articleCiidanka DANAB oo sameeyay howlgal lagu qabtay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Heshiis sir ah oo dhex maray Dowladaha Mareykanka iyo Iran oo...